15W 25W 48W I-IP65 DMX RGB engenamanzi engenawo amanzi noma i-LWW-1 ye-LED yeshashala,Ukukhanya Kwe-washer Kwe-led Ukukhanya,Guzheng Town Led Home Decorative,Constant Current Led Products - I-China 15W 25W 48W I-IP65 DMX RGB engenamanzi engenawo amanzi noma i-LWW-1 ye-LED yeshashala, Umkhiqizi nomhlinzeki
15W 25W 48W I-IP65 DMX RGB engenamanzi engenawo amanzi noma i-LWW-1 ye-LED yeshashala. UKUHLAWULA KWEZINDAWO ZAMANZI. Ibanga elisha elithakazelisayo kwi-Festive Lights ngomthelela wangempela yi-LED Wall Washer uchungechunge, ukudala isimo sengqondo esibucayi, ukunikeza ukukhanyisa kwesizinda esihle. Ingasetshenziswa futhi phezu kwendawo emincane kunomthelela omkhulu, ikakhulukazi lapho kusetshenziselwa amaningana ndawonye noma ukumboza izindawo ezinkulu ngomthelela oqinile. I-LED Yethu Yama-Wall Washers isetshenziselwa ukuhlobisa futhi igcizelela isakhiwo noma ingadi. Ububanzi bethu buhlanganisa umbala wokushintsha ama-washers odala imibala eminingi, njengokukhanya, ukufiphala noma okuyi-static.Ingasebenza kumodi emele nemodi ye-DMX, engakwazi ukudala imiphumela ehlukahlukene yokuguqula umbala, njengokungena ukukhanya, ukukhula, ukuqina, ukukhanya kwembala eyisikhombisa, nokunye okufanayo I-DMX 256 yegrey degree degree dimmer, i-DMX ehlelekile (izinkulungwane zemiphumela etholakalayo uma izibani eziningi zixhunyaniswa ndawonye). Imodi yokulawula yesikhanyiso: Imodi yokuzimela / I-Master / I-Slave mode / DMX / RGB noma i-Steady( 15W 25W 48W I-IP65 DMX RGB engenamanzi engenawo amanzi noma i-LWW-1 ye-LED yeshashala )
15W 25W 48W I-IP65 DMX RGB engenamanzi engenawo amanzi noma i-LWW-1 ye-LED yeshashala
©2005-2018 Karnar Xhumana nathi Imephu yesayithi Last modified: January 20 2022 03:23:33.